Mba hanatsarana tsara kokoa ny famokarana, dia nametraka teknolojia vaovao Control Numerical Control (CNC) YALIS. Raha ampitahaina amin'ny fitaovan'ny milina tsotra dia mampiasa fampahalalana niomerika ny CNC mba hifehezana ny fivezivezena sy ny fanodinana ireo fitaovan'ny milina, izay afaka mameno ny fanodinana ny complex miaraka amin'ny kalitao sy ny marina ambony. Amin'ny taona 2020, ho fanampin'ny fampidirana ireo milina CNC, ny YALIS dia hanampy koa ny milina polishing automatique, ny milina mitondra fiara mandeha ho azy ary ny fitaovana vaovao hafa. Miaraka amin'ireo fitaovana ireo, nanatsara be ny famokarana sy ny fahaizany manamboatra ny YALIS, ary nihatsara kokoa ny rafitra fizotran'ny famokarana.
Ny taona 2020 no taona voalohany nanokafan'ny YALIS ny orinasan-tsariny manamboatra. Miaraka amin'ny fampidirana tsy tapaka ny milina famonoana mandeha ho azy, ny milina fandefasana azy ho azy, ny fonosana visy ho azy ary ny fitaovana mandeha ho azy hafa, ary koa ny fampidirana mpiasa ara-teknika matihanina, ny rafitra famokarana dia voadona ho velona. Mandritra izany fotoana izany, ny YALIS dia nanamafy ny fisafidianana sy ny fitantanana ny rojom-pamatsy, nametraka ny fizotran'ny fitantanana rojom-pamokarana ary nanamafy ny fahaizana mifehy ireo mpamatsy.
Masinina fanasitranana masira
Milina fanariana maty ho azy
Ny fanamarinana ny rafitra ISO an'ny orinasa, ny fanatsarana hatrany ny fahaizan'ny famokarana, ny fanaraha-maso kalitao henjana kokoa ny vokatra namboarina sy ny vokatra mahazatra ary ny fanamafisana ny fandefasana dia ahafahan'ny YALIS mitazona ny mpanjifa amin'ny fifaninanana masiaka amin'ny ho avy ary mahafeno ireo filàna isan-karazany namboarina mpanjifa.
Masinina manosotra mandeha ho azy
Masinina fanaraha-maso informatika
Masinina fanandramana tsingerina